Shirkadaha, kulammada waxaa badanaa la socda warbixinnada ama emailada ugu dambeysa si kuwa aan awood u lahayn in ay ka soo qayb galaan ay ka warqabaan waxa la sheegay, ama kuwa jooga si ay u heystaan ​​diiwaan qoran. . Maqaalkani, waxaan kaa caawinaynaa inaad ku qorto emayl kooban oo ku xiga ka dib kulan.
Qor soo koobid kulan
Markaad qoraal ka qaadaneyso kulanka, waxaa jira qodobo muhiim ah oo ay tahay in la xuso si markaa ay u awoodaan inay qoraan soo koobid:
Tirada ka qaybgalayaasha iyo magacyada ka qaybgalayaasha
Nuxurka kulanka: taariikhda, waqtiga, goobta, qabanqaabiyaha
Mawduuca kulanka: maaddada ugu weyn iyo maadooyinka kala duwan ee laga wada hadlay
Inta badan arrimaha la xalliyo
Dhamaadka kulanka iyo shaqooyinka loo qoondeeyey ka qaybgalayaasha
Fariintaada kooban ee kulanka waa in loo diraa dhamaan ka qaybgalayaasha, laakiin sidoo kale kuwa ku hawlan, tusaale ahaan waaxdaada, kuwaas oo aan awoodin inay ka soo qayb galaan ama aan la martiqaadin.
Waa tan a model email soo koobitaanka kulanka:
Mawduuca: Soo koobitaanka kulanka [taariikhda] ee ku saabsan [maaddada]
Fadlan halkan hoose ka eeg soo koobida kulankan [mawduuca] oo martigelisay [martida], oo ka dhacay [goobta] [taariikhda].
X dad ayaa goobjoog ka ahaa kulankaan. Mrs / Mr. [qabanqaabiye] ayaa ku furay kulanka soo bandhigid ku saabsan [mawduuca]. Ka dib waxaan ka wada hadalnay arrimaha soo socda:
[Liiska arimaha la kala hadlay iyo soo koobidda kooban]
Ka dib dooddeenna, qodobbada soo socda ayaa soo baxay:
[Liiska gabagabada kulanka iyo hawlaha la qabanayo].
Kulanka xiga ayaa la qaban doonaa [taariikhda] si loo daboolo horumarka laga gaaray arimahan. Waxaad heli doontaa labadii toddobaad ka hor martiqaad ka qayb qaadashada.
Qaabkaemail kulan kooban Janaayo 19th, 2021Tranquillus
horeFariin email u dir si aad uga jawaabto codsiga macluumaadka kormeeraha
socdaQor emayl haddii aad maqantahay